15 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah oo Lacag La'aan ah Dadka Waaweyn 2022
Dadka qaangaarka ah ee raba inay helaan diblooma kharash yar oo aan kharash lahayn waa inay tixgeliyaan dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka qaangaarka ah ee lagaga hadlay qoraalkan baloogga oo ay la socdaan xiriirro khuseeya si ay wax badan uga ogaadaan waxyaabaha ay bixiyaan.
Arday badan ayaan dhammayn karin dugsiga sare dhowr sababood awgood laakiin sababaha caadiga ah ayaa ah dhaqaale la'aan, caqabado caafimaad, ama aan danaynayn helitaanka waxbarasho halka kuwa kalena ay noqon karaan sababo shaqsiyeed. Sabab kasta ha ahaato laakiin haddii aad rabto inaad ku laabato, sii wad, oo aad dhammaysato dugsiga sare markaa maqaalkani wuxuu ku hagi doonaa oo markan waxaad ku raaxaysan doontaa raacitaan buuxa si aad u hesho diblooma aadan lacag ku bixin doonin helitaanka .
Ka sokow inaadan lacag ku bixin inaad wax barato oo aad hesho dibloomadaada dugsiga sare, wax kale oo xiiso leh ayaa ah in fasallada lagu qabto internetka. Waxaa laga yaabaa inaadan la kulmin tan sanadihii aad ahayd ardaygii hore ee dugsiga sare laakiin markan waxaad la kulmi doontaa raaxada barashada internetka waana hubaal inay la imaanayso faa'iidooyin badan.
Si ka duwan nidaamka barashada dhaqameedka, kama qayb geli doontid fasallo jireed, fool-ka-fool ah, ama qadka tooska ah sabab kasta ha ahaatee, dhammaan hawlgallada, habraacyada, iyo hababka ayaa lagu samayn doonaa onlayn. Taasi waa, waxaad qaadan doontaa fasalladaada oo wax ku baran doontaa onlaynka iyo sidoo kale qabashada meeleynta, shaqada fasalka, imtixaannada, iyo imtixaannada onlaynka ah. Barashada onlaynka ah waa isbeddelka hadda ka jira goobta waxbarashada oo leh qaabkii ugu dambeeyay ee waxbaridda iyo barashada, waa inaad soo gashid.
Si aad u ogaato sida barashada internetka ee horumarsan ay u jiraan dugsiyo sare oo onlayn ah oo la aqoonsan yahay sidaas darteedna bixiya shahaadooyin la aqoonsan yahay. Jaamacadaha ayaa sidoo kale tan iyo markii ay hirgeliyeen adeegsiga intarneedka si ay waxbaris u siiyaan ardayda u horseedda bachelor, master, iyo, xaalado aad u yar, shahaadooyinka dhakhtarnimada.
Dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah - oo aan wax kharash ah u lahayn dadka waaweyn, ayaa gacan ka geysatay xallinta wixii arrimo ama sababo ah ee aad qabto ee ku saabsan dhammaystirka dugsiga sare goor hore. Kuwa dhaqaale ahaan la loollamay, kuwa halkan ku taxan waa u lacag la'aan haddaba uma baahnid inaad lacag ku bixisid waxbarasho, waxaa jira kuwo mushahar leh in kastoo aan halkan lagu qorin lagana doodin.
Kuwa leh arrimo caafimaad ama aan dhammayn karin dugsiga sare caqabad jidheed awgeed, shahaadada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ayaa kuu oggolaanaysa inaad fasallada ka qaadato raaxada gurigaaga ama meel kasta oo kugu habboon. Qalabka aad u baahan tahay waa kombiyuutar shaqeynaya ama PC iyo xiriir internet oo deggan.
Ugu dambayntiina, kuwa aan mar dambe u arkin nidaamka waxbaridda dhaqanka ama qaabka dugsiga sare oo xiiso leh oo ay tahay inay ka baxaan, dibloomada dugsiga sare ee khadka tooska ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn waxay u soo bandhigaysaa hab cusub, casri ah, oo goyn ah oo wax lagu barto. Mid kasta oo ka mid ah kooxahan dadka ah ee aad ka tirsan tahay, waxaad ku raaxaysan doontaa dabacsanaanta barashada onlaynka ah, taas oo ah, waad sii wadan kartaa mas'uuliyadaha kale inta aad internetka ku dhammaynayso waxbarashadaada dibloomada dugsiga sare.
Sidoo kale, nooc kasta oo aad gasho, ujeedka ugu weyn ee daabacaada nuxurkaan ayaa ah inay gacan ka geysato buuxinta kuwa aan haysan shahaadada dugsiga sare ama shahaado.
Kahor intaadan ku dhex milmin mawduuca ugu muhiimsan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u isticmaasho shaxda nuxurka hoose si aad ugu sahlanaato oo dhaqso ugu gudubto maqaalka.
1 Waa maxay Dibloomada Dugsiga Sare?
2 Yaa ka dalban kara shahaadada dugsiga sare onlayn?
3 Ma ku heli karaa shaqo shahaado dugsi sare oo onlayn ah?
4 Immisa ayaan ku kasban karaa shahaadada dugsiga sare?
5 Shuruudaha dibloomada dugsiga sare onlayn
6 Sida Looga Codsado Dibloomada Dugsiga Sare onlayn
7 Dibloomada Dugsiga Sare ee Lacag La'aanta ah - Qiimaha Dadka Waaweyn
7.2 2. Akadeemiyada Virtual Alabama
7.3 3. Dugsiga Sare ee Hope
7.6 6. Dugsiga Keystone
7.7 7. Akadeemiyada Guusha ee Texas
7.8 8. Akadeemiyadayda Virtual
7.9 9. Dugsiga Dhexe ee Middleton
7.10 10. Dugsiga Sare ee Orion
7.11 11. Dugsiga Whitmore
7.12 12. Dugsiga Sare ee Virtual Franklin
7.13 13. Dibloomada Dadka Waaweyn ee Jaamacadda Brigham Young
7.14 14. Dugsiga Sare ee Liberty
7.15 15. Xarunta Waxbarashada Fogaanta Waqooyiga Dakota (NDCDE)
8 Su'aalaha la isweydiiyo ee Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah oo Lacag La'aan ah Dadka Waaweyn
Waa maxay Dibloomada Dugsiga Sare?
Dibloomada dugsiga sare waa shahaadada ka bixitaanka dugsiga oo la bixiyo marka qalin -jabinta dugsiga sare la helo koorso waxbarasho oo socotaa afar sano, laga bilaabo fasalka 9 illaa 12 oo dhammaystiraya dhammaan shuruudaha waxbarashada ee dugsigaaga, degmadaada, magaaladaada, iyo gobolkaaga.
Yaa ka dalban kara shahaadada dugsiga sare onlayn?
Dadka qaangaarka ah, iyo sidoo kale dhalinyarada, kuwaas oo aan dhammaysan karin dugsiga sare sababo jira awgood, waxay codsan karaan shahaadada dugsiga sare ee onlaynka ah.
Ma ku heli karaa shaqo shahaado dugsi sare oo onlayn ah?
Haa, waxaad ku shaqaysan kartaa dibloomada dugsiga sare ee onlaynka ah intaad ka heshay dugsi sare oo la aqoonsan yahay oo internetka ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah lagaga hadlay maqaalkan.
Immisa ayaan ku kasban karaa shahaadada dugsiga sare?
Dibloomada dugsiga sare waxaad ku kasban kartaa celcelis ahaan $ 746 asbuucii ama $ 38,792 sanadkii.
Shuruudaha dibloomada dugsiga sare onlayn
Shuruudaha looga baahan yahay dibloomada dugsiga sare ee internetka waa isku xirnaan internet oo deggan iyo kombiyuutar.
Sida Looga Codsado Dibloomada Dugsiga Sare onlayn
Dalbashada dibloomada dugsiga sare ee internetka waa sahlan tahay oo hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka sida loo maro:
Ka hel qoraalkaaga waxbarasho ee rasmiga ah dugsigaagii hore
Ka codso dugsiga sare ee internetka ee aad dooratay
Hel aqoonsiga ardaygaaga oo buuxi jihaynta internetka
Kadib dhammaystirka hanuuninta, la kulan la -taliye
Bilow waxbarashadaada oo kasbato shahaadada dugsiga sare ee internetka
Hoos waxaa ku taxan oo laga wada hadlay waa dibloomada dugsiga sare oo lacag la’aan ah oo aan wax kharash ah ugu fadhiyin dadka waaweyn, kaliya waxaad u baahan tahay inaad dhex marto, dooro dugsiga doorashadaada, oo raac tallaabooyinka kore si aad u bilowdo oo aad isla markiiba u dhammaystirto dibloomada dugsiga sare
Dibloomada Dugsiga Sare ee Lacag La'aanta ah - Qiimaha Dadka Waaweyn
Waa kuwan 15ka ugu sarreeya shahaadada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn, shabakadda isku xirta mid kasta oo ka mid ah dugsiyada ayaa laguu siiyay si aad u hubiso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dugsiga.
Akademiyada Virtual Alabama
Rajada Dugsiga Sare
Iskuulada Pinnacle Charter
Smart Horizons Carer Online High School
Akadeemiyada Guusha Texas
Dugsiga Sare ee Orion
Franklin School High School
Dibloomada Dadka Waaweyn ee Brigham Young
Dugsiga Sare ee Liberty
Xarunta Waqooyiga Dakota ee Waxbarashada Fogaanta (NDCDE)
Kani waa mid ka mid ah 15 dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la'aan ah ardayda, manhajka halkan waa wadar ahaan 21. 5 dhibco waxaana ku jira koorsooyinka Ingiriisiga iyo Xisaabta. Ardaydu waxay dooran karaan shan dookh oo u dhexeeya xulashada tacliinta, sida suugaanta iyo aljebra ilaa xulashada xirfadaha sida korantada iyo nijaarka.
Penn Foster wuxuu horumarin doonaa xirfadahaaga wax ku oolka ah si uu kaaga caawiyo jidkaaga shaqo. Dhammaan casharrada waxaa lagu sameeyaa internetka, iyo sidoo kale meelaynta, imtixaannada, iyo imtixaannada. Waxaad heli doontaa aqoonsi la aqoonsan yahay maadaama iskuulku uu aqoonsan yahay AdvancED iyo Ururka Kulliyadaha iyo Dugsiyada Guddiga Dugsiyada Sare ee Gobolka Dhexe.
2. Akademiyada Virtual Alabama
Markaad iska diiwaangeliso dugsigan sare ee onlaynka ah, waxaad marin u yeelan doontaa waayo-aragnimo waxbarasho heer caalami ah oo kaa caawin doonta inaad gaarto kartidaada waxbarasho ee buuxda intaad wax baranayso. Waxay ardayda siiyaan waayo-aragnimo waxbarasho oo tayo sare leh oo bilaash ah iyagoo sidoo kale taageeraya waxqabadkooda bulsheed iyo ka-baxsan.
Alabama Virtual Academy waa mid ka mid ah dugsiyada sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn waxayna u furaysaa ardayda qalin jabisa fursado badan. Waxaad go'aansan kartaa inaad gasho xoogga shaqaalaha oo aad shaqo bilowdo ama aad sii wadato tacliintaada kulliyad ama jaamacad afar sano ah.
3. Dugsiga Sare ee Hope
Kani waa mid ka mid ah dugsiyada sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn waana u bilaash oo keliya Ardayda Dugsiga Sare ee Arizona ee ka yar 22 sano. Koorsooyinka ayaa gebi ahaanba lagu qabtaa onleenka waxayna leeyihiin waxbarid ku saleysan fiidiyaha, imtixaannada onlaynka ah, su'aalaha, qoraallada internetka, iyo waxqabadyada. Dugsiga sare waxaa lagu aqoonsaday Cognia, oo ah hay'ad aqoonsi oo sharci ah, sidaa darteed shahaadadaada diblooma ayaa si siman loo aqoonsan yahay.
VISit Website -ka Dugsiga
Dugsiyada Charter-ka ee Pinnacle waa koox lacag la'aan ah, oo ah dugsiyo dawladeed oo la aqoonsan yahay oo ku yaal Arizona oo waxbarasho siiya ardayda fasalada 6-12. Dugsiyada onleenka ah waxay ardayda siiyaan fursado ay ku heli karaan ku habboon baahidooda waxbarasho.
Dugsigani waa qayb ka mid ah Smart Horizons Career Online Education, oo ah madal loogu talagalay in loogu adeego dad badan oo waaweyn iyo dhallinyaro waaweyn oo halkaas jooga oo aan haysan shahaadada dugsiga sare. Dugsiga sare wuxuu bixiyaa shahaadada dugsiga sare oo la aqoonsan yahay oo lacag la'aan ah dadka waaweyn oo leh macallimiin shati ka haysta gobolka oo siiya dhiirigelin iyo taageero ballaaran ardayda.
Culeyska amaahda barnaamijka waa 18 dhibco iyo dhibcaha wareejinta waxaa loo aqbalaa ilaa 14 koorso. Dhamaadka barnaamijka, ardayda waxaa la siin doonaa shahaado diblooma oo ay u isticmaali karaan inay sugaan shaqooyinka heerka gelitaanka sida maamulaha xafiiska, xannaanada carruurta, iyo aqoonyahanka, ama u sii gudbaan kulliyadaha.
6. Dugsiga Keystone
Dugsiga Keystone waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn, ardaydu waxay dooran karaan doorashooyin waxbarasho oo kala duwan si ay u gaaraan ujeedooyinkooda shaqsiyeed. Macno malahan haddii aad rabto inaad wax barato waqti buuxa ama aad u baahan tahay casharo shaqsiyeed. Adiga oo ah qof weyn, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad hesho dibloomada dugsiga sare oo buuxa ama aad barato xirfado cusub si aad u hormariso xirfaddaada oo aad iska qori karto wakhti kasta.
Intaa waxaa sii dheer, Keystone waxaa aqoonsi ka helay AdvancEd iyo Guddiga Gobolka Pennsylvania ee Iskuulada shatiga gaarka loo leeyahay, iyo Dawlada Dhexe ee Pennsylvania. Kuwani waa hay'ado aqoonsi oo sharci ah waxaana hubaal ah inaad heli lahayd diblooma la aqoonsan yahay.
7. Akadeemiyada Guusha ee Texas
Kani waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ee ku saleysan Arlington, Texas waxaana aqoonsaday Wakaaladda Waxbarashada Texas iyo AdvancED. Adiga oo ah arday qaangaar ah oo ku jira TSA oo raadinaya diblooma internetka, waxaad heli doontaa fasalo hal mar ah oo aad ku shaqayso xawaarahaaga.
Koorsooyinka la heli karo ee aad go'aansan karto inaad barato waa maareynta macluumaadka ganacsiga, maareynta ganacsiga, tikniyoolajiyadda korantada, hordhaca xisaabinta, iyo tikniyoolajiyadda tuubooyinka iyo kuwo kale.
8. Akadeemiyadayda Virtual
My Virtual Academy waa dugsi lacag la'aan ah oo lacag la'aan ah oo diiradda lagu saarayo darajooyinka K-12 ee dadka deggan Michigan siinaya fursado waxbarasho oo dabacsan oo loo diyaariyey si loo qanciyo baahida ardayga. Iyada oo la kaashaneysa dugsiyada dadweynaha ee Michigan oo dhan, akadeemiyadu waxay caawisay kumanaan qof oo waaweyn iyo dhallinyaro waaweyn si ay u helaan shahaadadooda dugsiga sare.
Waxaa jira barnaamijyo online ah oo waqti-buuxa ah iyo waqti-dhiman waxaadna dooran kartaa midka adiga kugu habboon. Diiwaangelinta mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada waa sanadka oo dhan, yacnii, waxaad ka codsan kartaa diblooma internetka ee dadka waaweyn mar kasta oo aad diyaar u tahay.
9. Dugsiga Dhexe ee Middleton
Waxaa aqoonsaday Cognia oo ay maamusho Catapult Learning, Inc., Middleton Academy waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn. Manhajka hal-abuurka leh ee lagu bixiyo habka tooska ah ee ardayga ee ku wajahan waxbarashada ayaa ka dhigaysa akadeemiyadda meel wanaagsan oo dadka waaweyni ku kasban karaan shahaadada diblooma online-ka.
10. Dugsiga Sare ee Orion
Dugsiga Sare ee Orion waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn, waxaa aqoonsaday Ururka Macallimiinta iyo Dugsiyada Masiixiyiinta (ACTS), iyo Ururka Kulliyadaha Koonfurta iyo Golaha Dugsiyada ee Aqoonsiga iyo Hagaajinta Dugsiga (xiriir la leh leh Cognia). Labadaba Cognia iyo ACTS oo ay aqoonsadeen Guddiga Aqoonsiga Dugsiga Gaarka ah ee Texas.
Waxaa jira in ka badan 200 koorso oo laga kala dooran karo, laga bilaabo koorsooyin waxbarasho oo madaxbannaan ilaa AP iyo ikhtiyaarrada laba-credit, waxaa jira koorso loogu talagalay arday kasta, ha ahaado qof weyn ama dhallinyaro. Waqti-buuxa ama waqti-dhiman, Orion waa la horumariyey waxaana maamula barayaal khibrad leh oo u heellan inay taageeraan barte kasta si loo gaaro natiijooyin guul leh.
Intaa waxaa sii dheer, Orion wuxuu siiyaa bartayaasha xirfadaha ay u baahan yihiin si ay u gaaraan yoolalkooda gaarka ah iyo inay heer sare ka gaaraan qalin -jabinta kulliyadda, dugsiga ganacsiga, milatariga, farshaxanka, ciyaaraha fudud, iyo xoogga shaqaalaha. Waxaad iska qori kartaa barnaamijka dibloomaha ee waqtiga-buuxa ama waqti-dhiman ah.
Dibloomada dugsiga sare ee dadka waaweyn ee Orion waxay ku qalabeysaa ardayda barashada xirfadaha lagama maarmaanka u ah inay gaaraan yoolalkooda shaqsiyeed iyo inay heer sare ka gaaraan qalin -jabinta kulliyadda, dugsiga ganacsiga, milatariga, farshaxanka, ciyaaraha fudud, iyo xoogga shaqaalaha.
11. Dugsiga Whitmore
Dugsiga Whitmore waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ee qaata ardayda sannadka oo dhan. Diiwaangelintu waa 12 bilood oo buuxa oo ka bilaabmaysa taariikhda ardaygu is -qoro. Ardaydu sidoo kale way qalin jebiyaan wakhti kasta oo sannadka ah marka ay dhammaystaan ​​shardiga qalin -jabinta.
Markay timaaddo jawiga waxbarashada, Dugsiga Whitmore wuxuu ku dadaalaa inuu abuuro mid taageera, loolan leh, oo gaar ah. Qaadashada mas'uuliyadda waxbarashadooda ayaa la dhiirri-gelinayaa, taasoo u oggolaanaysa ardayda inay horumariyaan xirfado ay ka mid yihiin is-hagidda iyo isku-tiirsanaanta, iyo sidoo kale maareynta waqtiga iyo xirfadaha fekerka muhiimka ah oo ay ku sii dabaqi karaan xoogga shaqaalaha, waxbarashada sare, ama meel kasta oo noloshu ku qaadato.
12. Dugsiga Sare ee Virtual Franklin
Gurigu waa fasalka ugu fiican, Franklin Virtual High School wuxuu bixiyaa koorsooyin lagu dhammayn karo raaxada gurigaaga. Waxay xafiisyo ku leedahay Tallahassee, Florida, iyo Scottsdale, Arizona. Intaa ka sokow, waxay shati ka haystaan ​​AdvancED iyo DEAC, sidoo kale.
Nidaamka gudbinta tooska ah ee Dugsiga Sare ee Franklin Virtual High wuxuu kor u qaadi karaa barashada fasalkaaga. Carruurta, dhallinyarada, iyo dadka waaweynba si isku mid ah ayaa isku qori kara dugsiga. Horumarkaaga ayaa lala socon doonaa inta koorsadu socoto, waxaana la bixin doonaa ilo dheeraad ah, oo ay ku jiraan umeerin iyo dabagal.
Way fududahay in la dhex maro oo lagu bixiyo hawlo soo jiidasho leh oo kugu dhiirrigelinaya inaad sii waddo cilmi -baaristaada ka dib markaad dhammayso koorsada. Meel dabacsan ayaa la ilaaliyaa, koorsooyinkana waa la geli karaa waqti kasta. Kani waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn taas oo siin doonta xirfadaha iyo agabka ay u baahan yihiin si ay ugu sarreeyaan adduunka dibedda.
13. Dibloomada Dadka Waaweyn ee Jaamacadda Brigham Young
Jaamacadda Brigham Young ee Utah waxay ku taal Provo waxaana aqoonsaday AdvancED. BYU waxaa aasaasay, taageeray, oo hagayey himiladeeda Kaniisadda Ciise Masiix ee Ilaalada-dambeeyaha (LDS), oo dadka ka caawisa raadintooda dhammaystirka iyo nolosha weligeed ah.
Si ay xitaa ugu fududaato ardayda ka timaadda dalka oo dhan, waxay sidoo kale bixiyaan umeerin lacag la'aan ah, taas oo u oggolaanaysa inay galaan imtixaanka dugsiga sare iyagoo adeegsanaya taleefannadooda, kiniinnadooda, ama PC -yadooda. Ardaydu waxay bixin karaan koorsooyin ku saabsan Ganacsiga, Injineernimada, Waxbarashada, Farshaxanka Farshaxanka iyo Isgaarsiinta, Bani'aadamnimada, iyo Daraasaadka Caalamiga ah iyo Aagga, iyo qaybaha kale ee daraasadda.
Intaa waxaa sii dheer, machadku wuxuu siiyaa dibloomada dugsiga sare ee qadka ee dadka waaweyn wuxuuna ku yimaadaa lacag la'aan. Waxay bixin karaan mid kasta oo ka mid ah koorsooyinka kor ku yaal oo shaqooyin aamin ah ka heli kara jagooyinka heerka gelitaanka ama sii wadan kara inay sii wataan shahaado afar sano ah.
14. Dugsiga Sare ee Liberty
Dugsiga Sare ee Liberty waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn shahaado dugsi sare oo lacag la’aan ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn. Waxay ku saleysan tahay Brattleboro, Vermont laakiin waxay bixisaa fasalo onlayn ah oo u horseeda diblooma. Barnaamijku wuxuu u furan yahay oo keliya dadka waaweyn 18 iyo ka weyn, waxaana loogu talagalay inuu ka caawiyo ardayda dhammaynta waxbarashadooda dugsiga sare
Koorsooyinka la bixiyaa waxay ku qoran yihiin Ingiriis, Xisaab, iyo Barashada Bulshada ardayda isdiiwaangelisa. Waxaa jira koorsooyin saynis iyo sidoo kale koorsooyin sahamin ah oo aad heli karto si aad u dhisto xirfadaha kuu bilaabi kara xirfadda xoogga shaqaalaha.
15. Xarunta Waxbarashada Fogaanta Waqooyiga Dakota (NDCDE)
Liiskayagii ugu dambeeyay ee dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn waa NCDCE, waa dugsi waxbarasho la aqoonsan yahay, masaafad ah oo siiya fursado waxbarasho ardayda meel kasta oo adduunka ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya xiriir internet oo deggan iyo PC shaqeynaya si aad ugu biirto barnaamijka dibloomada dadka waaweyn oo aad u hesho shahaado kuu heli karta shaqo aad u fiican.
Machadku wuxuu ku salaysan yahay Fargo, ND, waxaana aqoonsaday AdvancED. Ardaydu waxay ku bixin karaan koorsooyin Xirfadaha Caafimaadka, Waxbarashada Farsamada, Barashada Kombiyuutarka, Waxbarashada Ganacsiga, Qoyska, iyo Sayniska Macmiilka, Waxbarashada Jirka iyo Caafimaadka, Xisaabta, Aerospace, iyo kuwo kale oo badan.
Kuwani waa 15 dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn, dooro mid ka mid ah dugsiyada adiga ku rafcaanka ah oo bilaaba safar aad ku dhammaynayso dugsiga sare oo aad ku heli lahayd diblooma.
Su'aalaha la isweydiiyo ee Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah oo Lacag La'aan ah Dadka Waaweyn
Ma ka heli karaa dibloomadayda dugsiga sare onlayn?
Helitaanka dibloomada dugsiga sare ee internetka waa sahlan tahay, haa, waxaad ka heli kartaa internetka
Immisa ayey ku kacaysaa in lagu helo shahaadada dugsiga sare onlayn?
Qiimaha helitaanka shahaadada dugsiga sare ee khadka tooska ah ayaa u dhexeysa $ 5,495 illaa $ 8,495
Waa maxay barnaamijka dibloomada dugsiga sare ee ugu fiican ee dadka waaweyn?
Dibloomada dugsiga sare ee ugu fiican ee dadka waaweyn waa Dugsiga Sare ee Excel.
Top 15 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee Aqoonsiga Onlineka ah
Sida Loo Helo Ogolaanshaha Mastersford Online Masters
13 Dugsiyada Sare ee ugu Xun Kanada
16 Dibloomada Sare ee Shahaadada Sare ee Maareynta Barashada Fogaanta
Koorsooyinka Free Online Dugsiyada Waxbarshada Bilaashka ah Baro Xirfad Online koorsooyinka interneedka wax ku barta internetka
ugu fiican shahaadada dugsiga sare ee bilaashka ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka waaweynshahaado dugsi sare oo bilaash ah oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn
Previous Post:Sida Loo Qoro Qormo Wanaagsan Jaamacadda
Post Next:Shaqooyinka Jirka 13 ee Ugu Fiican oo Bixiya